एक चित्रकारको हरेक मानिसको मन छुने कथा ! • Janaboli
एक चित्रकारको हरेक मानिसको मन छुने कथा !
एउटा शहरमा एकजना चित्रकार बस्थे । उसले एक बहुत सुन्दर तस्वीर बनाएर एउटा चोकमा राख्यो र चित्रको मुनि लेख्यो, “यो चित्रमा जसलाई जहाँ नमिलेको जस्तो लाग्छ, त्यहाँ चिनो लाइदिनोस्!!” जब उसले साँझ उक्त चित्र हेर्यो, पूरै चित्रभरी सबै ठाउँमा चिनो लागेर एकदम खराब भैसकेको थियो ।
यो देखेर उ अत्यन्त धेरै #दुखी भयो । के गर्ने सोच्न सकेन र दिक्क मनेर बसिराख्याथ्यो, त्यत्तिकैमा स्वामी त्यही बाटो भएर कतै जाँदै थियो, चित्रकारलाई त्यस्तो हालतमा देखेर स्वामीजीले कारण सोधे र चित्रकारले पूरै घटनाको बेलिबिस्तार लगायो । यो सुनेर स्वामीजीले भने, “तिमी एउटा काम गर, भोली अर्को चित्र बनाएर यहीं राख तर मुनि यो लेख की – यस चित्रमा जसलाई जे नमिलेको जस्तो लाग्छ, त्यसलाई मिलाएर जानुहोला!” चित्रकारले भोलिपल्ट त्यसै गर्यो र साँझ हेर्दा चित्र जस्ताको तस्तै थियो, कसैले छुनसम्म पनि छोएन । उ संसारको प्रवृति र नियति बुझ्न समर्थ भयो ।
“खोट निकाल्नु, निंदा गर्नु, कुरा काट्नु, आलोचना गर्नु, उपदेश दिनु, सम्भव छैन भन्नु, आदि एकदमै सजिलो छ, दुनियाको जस्तोसुकै निकम्माले पनि गर्न सक्छ तर समस्या चिनेर सही समाधान गर्नु चाहिँ सबैको वशको कुरा हैन ।” यही नै जिन्दगीको सच्चाई हो, सबैले दिने र कसैले लिन नचाहने एउटै कुरो छ, त्यो हो “सल्लाह (Advice) अनिल सर्मा